Ankarafantsika : Gadra nitsoaka ny fonja, namono mpiandry ala
mardi, 18 avril 2017 13:23
Sarin'ilay mpiandry ala voafira antsy be
Gadra nilefa miaraka amin’ny namany izay vao avy nahavita sazy, nivoaka fonja vao roa volana izay no namono tamin’ny fomba feno habibiana mpiambina iray ao amin’ny alan’Ankarafantsika.
Enin-dahy izy ireo no tra-tehaky ny mpiambina tao anaty ala, ao amin’ny Fokontany Bevaza, Kaominina Manerinerina, Distrika Ambatoboeny, nihinana gidro amin’irony kazarany antsoina hoe : komba irony, izay tena lehibe amin’ny gidro ao Ankarafatsika, ary arovana fatratra tsy ho lany tamingana.
Nisy ny fifamaliana ka nalain'ilay mpiambina sary izy ireo, dia lasa ilay mpiambina taorian’izay. Nony lasa ilay mpiambina dia nanaraka azy avy ato aoriana ny roalahy tamin’izy enin-dahy nihinana fa ny efatra kosa nandositra. Vao tratran’izy ireo ilay mpiambina dia nofirain’izy ireo fibara, antsy farango maranitra, tamin’ny faritry ny lohany ka maty tsy tra-drano, ary iny ry zareo no nitsoaka.
Rehefa nataon’ny Zandary ny fikarohana dia tratra izy enin-dahy. Tao anatin’ny fanadihadiana, voatondro ny roalahy tena nahavanona ny loza. Nanaiky ry zareo fa hanoro ny toerana misy ilay razana, nony tonga tao dia nanao ny fizahana ny dokotera sy ny Zandary ary Miaramila taorian’izay dia nentina hikatra an-tanàna ireo jiolahy sy ny razana.
Teny an-dalana anefa, nikasa hamaly sy hitsoaka izy roalahy, ka nitifitra avy hatrany ny mpitandro filaminana iray ary dia maty tsy tra-drano izy roalahy.
Nentina avy hatrany niazo an’Ambatoboeny ireo efa-dahy, tsy ho tratry ny fitsaram-bahoaka. Hatolotra ny Fampanoavana ao Mahajanga anio ny raharaha.
Levitra Where To Buy [url=http://cialtobuy.com ]generic cialis[/url] Brand Name Viagra Online Australia
Viagra 100mg Price Walmart Potenzmittel Viagra Preis Secure Ordering Doxycycline
Discount isotretinoin cialis Vendo Viagra Barcelona
dimanche, 17 septembre 2017 09:24